भ्यालेन्टाइन लभ म्यासेज - प्रेम दिवस - साप्ताहिक
भ्यालेन्टाइन लभ म्यासेज
फाल्गुन ३, २०७५
भ्यालेन्टाइन डेका अवसरमा साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणमा बुलबुल चलचित्रद्वारा प्रायोजित प्रेम सन्देश प्रतियोगितामा प्राप्त केही उत्कृष्ट प्रेम सन्देशहरु:
तिमीले रेट्यौ मुटुमा चुपचाप सहिरहें,
मन नदुखेको त कहाँ हो र हाँसी–हाँसी छटपटाइरहें ।
धेरै कुरा भन्न त मन थियो तर शब्दै आएन
मात्र थाहा छ– आई लभ यू ।
आकाशबाट खस्ने हरेक तारामा तिमीलाई याद गर्छु, तर तिमी केवल यादमै सीमित भयौ ।
कुनै व्यक्ति मुटुको नजिक हुन्छ भने दूरीले त के नै फरक पर्छ र ?
प्रिय, तिम्रै कारणले म आज म भएको छु
तिमी र म कहिले हामी बन्ने ?
चाहे म असनमा हिडौं, चाहे न्युरोडमा
तिमीबिना सुनसान लाग्छ यो भीड पनि ।
मानिसहरूको भीडको सागरमा मेरा आँखा जहिल्यै तिमीलाई खोज्छन् ।
कहिलेकाहीं मेरो आफ्नै आँखाले मेरै मुटुको ईष्र्या गर्छन् ।
किन थाहा छ ?
तिमी जहिले मुटुको नजिक हुन्छौं अनि आँखाबाट टाढा ।
जब म माया भन्ने शब्द सुन्छु, तिमीलाई नै सम्झन्छु ।
म धेरै पटक मायामा परें अनि हरेक पटक तिमीसँगै ।
जब तिम्रो साथमा हुन्छु, सबै दु:ख भुल्छु । के तिमी मेरो बन्छौ ?
प्रिय, मसँग कुनै शब्द छैन वर्णन गर्न मेरो माया तिम्रा लागि कति छ भनेर, किनभने यसमा कुनै सीमा छैन, म चाहन्नँ । यसमा प्रेमीको मायाको बिल्ला लगाउनलाई, किनभने यसलाई सायद म जसरी चन्द्रमाले धर्तीलाई निरन्तर शीतल छायाँ दिएर माया गरिरहन्छ र पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ वा यो माया नदीको पानीजस्तो जो निरन्तर समुद्रतर्फ मात्र केन्द्रित छ समुद्र कहिले नसुकोस् भनेर ।
तपेन्द्र थाडा मगर
हरदिन, हररात सदासर्वदा तिमी नै मेरो इच्छा हौं । जुन इच्छा मैले आफ्नो हरेक सपनामा सजाएको थिएँ । आज पनि उही सपना सजाउन चाहन्छु । मेरो अन्तिम स्वाससम्म सजाउन पाउँm– आई लभ यू फरएभर ।
मसँग मुटु छ । मुटु आफूसँग छ जस्तो लाग्दैन, तिमी टाढा हुँदा । मेरो मुटुमा तिम्रो वास चाहिएको छ, मायाले संसार अडिएको हुँदा मेरो मायाको संसारमा तिम्रो खँँचो छ ।
सम्हालिन्थ्यो कि चुलबुले मन घर भएसी,
मेरो नामको पछि तिम्रो थर भएसी ।
अझै कति पर्ख भन्छौ महिना पनि वर्ष भो,
तिमीसँगै जीवन जिउने रहर भएसी ।
पानी लिन धारा जाँदा पानी होइन, रित्तो भाडा बोकेर आएको त थाहै छ होला । आमाको गाली म एक्लै कति खानु, तिमी पनि बनिदेऊ न मेरो गाली खाने साथी— आई लभ यू मुसी ।
समयले तिमीसँग नजिक्याएथ्यो कास,
मुटु भनी सम्बोधनलाई दियौ तिमीले खास,
मूल ढोकामै बसी–बसी मागेको थिएँ पास,
अक्सिजन नै रै’छौ तिमी मैले फेर्ने सास ।
जुलियट सिजरको जस्तै सधैंभरि माया गरिरहूँ । जीवनमा अनेकौं कुरा झेल्न परे सधैँ सँगै झेलौँला ।
प्रिय, प्रेम गर्नेहरूलाई त सधैँ भ्यालेन्टाइन हो तर पनि फेब्रुअरी १४ पक्कै पनि विशेष होला र त प्रेम दिवस मनाउँछन् प्रेमिल जोडीहरू । त्यसरी नै म पनि तिमीसँग मीठा वात गर्न चाहन्छु, माया–प्रीतिका कुरा गर्न चाहन्छु, अरूभन्दा बेग्लै र अरू दिनभन्दा बेग्लै बनाउनेछु यो हाम्रो भ्यालेन्टाइनलाई †
जर्मन तानाशाह हिटलरले भनेका थिए— प्रेम होइन युद्ध गर्नुस् ।
किनभने युद्धमा तपाईं कि मर्नुहुन्छ कि बाँच्नुहुन्छ । तर प्रेममा तपाईं न बाँच्नुहुन्छ न मर्नुहुन्छ ।
मैले मौनतामा पनि प्रेमका हजार कुरा व्यक्त गरिरहेको हुन्छु, तर त्यसलाई सुन्न तिमिलाई कानले साथ दिएन,
बुझ्न तिमीलाई मनले साथ दिएन, त्यसैले मैले शब्दबाट प्रेम प्रस्ताव गर्दैछु ।
म तिमीलाई धेरै माया गर्छु सानी ।
यो दिन के हो मलाई थाहा थिएन, जब तिमी मेरो जीवनमा आयौ नि, तब मात्र मलाई मायाको आभास भयो अनि हाम्रो दूरी कम हँुदै गयो ।
तिमी त सधैँभरि मेरै आँखाअघि नै छौ, कसरी तिमीलाई यो मनबाट निकाल्न सकौंला र ? तिमी त हरपल हरक्षण मेरै श्वासमा छौ, कसरी तिमीलाई भुल्न सकौंला र ?
समयले उसैसँग टाढा बनाइदियो, जोसँग एकछिन छुट्टिने मन थिएन ।
म तिम्रा लागि रातो गुलाफझैँ भएछु ।
बसेछु मनमा, यत्रतत्र भएछु ।
सिउरिन्छु भनेरै चुँडेकी थियौ
सुँघेर फ्याल्दियौ, अलपत्र भएछु ।
गणेशमान सिंह ठकुरी
समयले उसैसँग मिलन गराइदियो, जोसँग एकपल पनि नछुटिने वाचा गरी माया गाँसेको थिएँ ।
हाम्रो चोखो मायामा दरार धेरै आए, बैरी लागे तर पनि टुटाउन र छुटाउन सकेनन् ।
फेरि पनि आयो भ्यालेन्टाइन जीवनसंगिनी, मीठो सम्झना सधैंभरि यसैगरी माया गर्न पाउँm ।
वर्षातमा ओत लाग्ने तिमी छाता बन्नुपर्छ
जीवनको कर्मशील अनेक पाटा बन्नुपर्छ
जीवन श्रृङ्गारिक उपन्यास हो भन्छन्
त्यहीँ उपन्यास रक्षक तिमी गाता बन्नुपर्छ
मेरी प्यारीलाई हृदयदेखि नै ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे ।
श्याम के अन्जान
प्रेम दिवसअघि गुलाफ दिनुको कारणचाहिं सुन्दर गुलाफसँगै काँडा नि हुन्छ, घोच्न सक्छ, त्यसैले सम्हालिएर प्रेम गर्नु भन्ने कुरा सिकाउन होला ।
च्याटमा घण्टौं कुरा भए पनि फोनमा दुई मिनेट पनि कुरा हुन नसकेको यो मेरो अधुरो प्रेम, आशा छ तिमीले यो वर्ष पक्कै पनि स्वीकार गर्नेछौ ।
चन्द्र शाही ठकुरी
प्रकाशित :फाल्गुन ३, २०७५
बुरा न मानो होलीमा
करण केसी डे
वर्किङ भिसामा ?
अमित दुगडका भ्यालेन्टाइन चुटकिला
उल्का पिण्डको लिलामी
भ्यालेन्टाइन डेमा रोमान्टिक प्रियंका
प्रेम दिवसबाट अरु
प्रेमदिवसको उपहार माघ २४, २०७०